नेपाली बजारमा सुनको मूल्‍य बढ्याे, ताेलाकाे कति ? - नेपालबहस
नेपाली बजारमा सुनको मूल्‍य बढ्याे, ताेलाकाे कति ?
| १२:४७:३० मा प्रकाशित
२० जेठ, काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्‍य तोलामा चार सय रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो दुई दिनदेखि स्थिर रहेको सुनको मूल्‍य बिहीबार भने चार सय रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको हो ।
बिहीबार आजका लागि महासंघले छापावाल सुनको प्रतितोला मूल्‍य ९४ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकेको छ । मंगलबार र बुधबार सुनको मूल्‍य प्रतितोला ९४ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै तेजावी सुनको मूल्‍यको कारोबार मूल्य ९४ हजार चार सय रुपैयाँ कायम भएको छ ।
बजारमा सुनको मूल्य निरन्तर बढ्दै १ हप्ता पहिले
उपचारको आशमा पूर्वलडाकु परियार २ मिनेट पहिले
पहिरोका कारण सिद्धार्थ राजमार्ग अबरुद्ध ६ मिनेट पहिले
नबिल बैंकको बैकिङ सेवा ४ देखि ७ गतेसम्म बन्द हुने ७ मिनेट पहिले
संक्रमणको उच्च जोखिमका कारण पनौती जात्रा स्थगित २३ मिनेट पहिले
बेलायतले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा दिने सहायता बजेट कटौती ३४ मिनेट पहिले
कालीगण्डकीमा आएको बाढीले सेतीवेणीका ८ घर डुबानमा ४६ मिनेट पहिले
एनसीसी बैंकको शेयरमा खरीद चाप उच्च ४९ मिनेट पहिले
बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत कार्य प्रभावकारी बनाउन प्रचण्डको आग्रह ५३ मिनेट पहिले
डाइभर्सनले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा यातायात सञ्चालन गर्न सास्ती ६० मिनेट पहिले
मेलम्ची बाढी अपडेटः सात जनाको मृत्यु, हेलिकोप्टरबाट उद्धार जारी [ भिडियाेसहित ] २ घण्टा पहिले
फरवार्ड लघुवित्तको संस्थापक शेयर भोलिदेखि लिलामीमा आउँदै ४ घण्टा पहिले
हात्ती छेक्न लगाइएको करेन्ट लागेर महिलाको मृत्यु १९ घण्टा पहिले
सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब तीन दर्जन बीमा कम्पनी सूचीकृत ७ दिन पहिले
कोरोनाले साढे ३६ लाख मानिसकाे रोजगार गुम्याे ३ हप्ता पहिले
बाँकेमा निषेधाज्ञा थप गरि कडाई, चोक चोकमा सेना परिचालन ४ हप्ता पहिले
आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञा खुकुलो, के-के गर्न पाइन्छ ? २ हप्ता पहिले
एसबीआई बैंक थप समस्यामा पर्न सक्ने ! स्प्रेडदर ५ प्रतिशत माथि,अधिकांश सूचक सुस्त गतिमा २ वर्ष पहिले
ह्याकरको निसानामा नेपालका बैंक १ वर्ष पहिले